Ny katedraly Justo ao Mejorada del Campo, fananana tombotsoan'ny kolotsaina? | Vaovao momba ny dia
Ny katedraly Justo ao Mejorada del Campo, fananana tombotsoan'ny kolotsaina?
Maria | | About us, Inona no ho hita
Hatramin'ny vato voalohany napetraka tamin'ny Oktobra 1961 tamin'ny andron'ny Virgen del Pilar ka mandraka ankehitriny dia talanjona izao tontolo izao isaky ny vato natsangan'i Justo Gallego hanangana ny katedraly manamboatra azy vita amin'ny akora simika. Amin'ny fananganana maharitra mandritra ny antsasaky ny zato taona mahery ary tsy misy drafitra, fananganana fahazoan-dàlana na tetik'asa teknika, ny Katedraly Justo dia niaina niaraka tamin'ny fanahin'ny fandravana hatrany.
Ny fahatahoran'ny mpifanila vodirindrina sy ny mpitsidika alohan'ny fialantsasatra mety hatao amin'ny tempoly amin'ny andro tsy anaovan'ny mpanangana azy no niteraka ny fanehoan-kevitra voalohany.
Ny vondrona politika rehetra nanatrika ny fivoriana plenary tao amin'ny filankevitry ny tanàna tao an-tanàna dia nanaiky ny fihetsiketsehana natolotry ny antoko UPyD ho fananganana ara-dalàna ny katedraly Justo sy ny fiarovana azy ireo ho toy ny Aset of Culture Culture. Manomboka eto dia miankina amin'ny governemanta monisipaly ny manangona ny antontan-taratasy ilaina rehetra ary manomana ny tatitra sy ny drafitra hanombohana ny rakitra.
Ankoatra ny taratasy sy ny fanekena ho fananana tombotsoan'ny kolotsaina, Justo Gallego dia mazava fa ny katedraly dia toerana fitsidihana fotsiny. SYIzy io dia tempolim-bavaka natokana ho an'ny Virgen del Pilar fa voalohany tsy maintsy vitaina ary omena lalana ofisialy hanome lanja.
1 Nofinofy lehilahy
2 Mahafantatra ny tetikasanao
3 Inona no hitranga manaraka?
4 Aiza ny katedraly Justo?
Ny tantaran'i Justo Gallego dia tantaran'ny finoana sy fiezahana hanatratra nofinofy. Tamin'ny 1925 dia teraka tao Mejorada del Campo izy ary, noho ny finoany mafy orina dia nanapa-kevitra ny handany ny fahatanorany tao amin'ny monasiteran'ny Santa María de Huerta ao Soria izy. Ny tuberculosis dia nanafoana ny tetikasany ary tsy maintsy nilaozany izany noho ny tahotra ny areti-mifindra mahery vaika.
Vitany ny nandresy ilay aretina fotoana vitsy taty aoriana saingy nanomboka kivy izy satria io fizarana io dia nanapaka ny faniriany hanokan-tena ho amin'ny fiainam-pivavahana. Na izany aza, Andriamanitra dia nanana drafitra hafa ho azy. Ny fomba fiteny malaza dia milaza fa ny lalan'ny Tompo dia tsy azo ovaina ary amin'ny taona 60, Justo Gallego dia nahita fomba hafa hanomezana lanja ny fiainany: ny fananganana katedraly natokana ho an'i Virgen del Pilar ao amin'ny tanàna niaviany.
Ny tena mahagaga amin'ny tantarany dia ny tsy fananany fahalalana momba ny maritrano na ny fananganana dia nanomboka nanangana ny katedraly teo amin'ny tanimboly misy ny taniny izy. Nahazo aingam-panahy manokana tamin'ny katedraly lehibe hitany tao amin'ny boky kanto maro.
Nivarotra ny fananany izy mba handoavana ny fandaniana amin'ny fividianana fitaovana mandra-pahalany ritrany. Taty aoriana dia nanohy nampiasa fitaovana namboarina izy ary niaraka tamin'ny fanampian'ny olona sy ny orinasa liana tamin'ny tetikasany.
Mahafantatra ny tetikasanao
Amin'izao fotoana izao ny Katedraly Justo ao Mejorada del Campo dia manana velaran-tany 4.740 metatra toradroa miaraka amin'ny fandrefesana mahatalanjona: 50 metatra ny halavany ary 20 ny sakany miaraka amin'ny haavon'ny 35 metatra hatramin'ny domes. Izy io koa dia manana tilikambo roa metatra 60 metatra sy ireo singa mampiavaka ny katedraly katolika: alitara, jirofo, crypt, tohatra, varavarankely fitaratra misy pentina, sns.
Toy ny hoe tsy ampy izany, ity tempoly ity koa dia ohatra iray amin'ny fanoloran-tena amin'ny tontolo iainana satria ny ampahany betsaka amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana azy dia avy amin'ny vokatra namboarina natolotry ny orinasa mpanao fananganana ao amin'ilay faritra.
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny maro, ny katedraly Mejorada del Campo dia toerana tsy miankina ankehitriny fa tsy toeram-bahoaka. Na izany aza, Justo dia nanokatra varavarana hahafahan'izay liana amin'ny asany misaintsaina akaiky azy io ary, raha maniry izy ireo, dia afaka mandray anjara amin'ny fanomezana kely.
Inona no hitranga manaraka?
Amin'izao fotoana izao, zava-miafina ny fahaveloman'ny Katedraly Mejorada del Campo taorian'ny nahafatesan'ny mpanorina azy na dia toa nametraka drafitra aza ny filankevitry ny tanàna hamadika azy io ho Toerana iray mahaliana ny kolontsaina.
Na izany na tsy izany, ireo izay nanatevin-daharana ny asany nandritra ny taona maro dia nilaza fa aorian'ny fahafatesan'i Justo dia hiady izy ireo mba hahatanteraka ny nofinofiny. Amin'ny lafiny iray dia nanamafy i Justo fa nanangana ny katedraly hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izy ary mahatsapa fa faly amin'ny zavatra efa vitany teo amin'ny fiainany.
Aiza ny katedraly Justo?
Ao amin'ny Calle Antonio Gaudí s / n ao Mejorada del Campo (Madrid). Avy any Madrid dia afaka mandeha any ianao amin'ny fiara afaka antsasak'adiny eo ho eo. Maimaimpoana ny fidirana hitsidika azy io fa ny fanomezana kosa dia ekena hamita azy. Ny ora dia manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 09:00 ka hatramin'ny 18:00 hariva ary ny sabotsy manomboka amin'ny 09:00 ka hatramin'ny 16:00 hariva. Nikatona ny alahady sy ny fialantsasatra.
Na iza na iza, mpino na tsy mino an'Andriamanitra, mahalala ny fomba hahafantarana ny fiezahana sy ny fahaizan'ity zokiolona manetry tena ity dia hankafy ny fandinihana ity tetikasa tsy mampino ity izay misy refy lehibe izay efa mihoatra ny antsasaky ny taonjato tao Mejorada del Campo no nanohitra ny fandehan'ny fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » About us » Ny katedraly Justo ao Mejorada del Campo, fananana tombotsoan'ny kolotsaina?
Huanglong, dobo maro loko ary Lovan'izao tontolo izao
Tranombakoka Sephardic Toledo, dia mankany amin'ny kolontsaina jiosy Espaniola